प्रियतमा सेरिज । फेसबुक स्ट्याटस -१
By Unknown January 23, 2019
#प्रियतमा बन्द नहोस् तिम्रो मुस्कान, भोगिरहन चाहन्छु निरन्तर यो चरमआनन्द !
#प्रियतमा तिम्रो चुम्बनको सम्मानमा १० दिनसम्म मुख नधुने निर्णय गरेको छु ।
#प्रियतमा, मेरो ओठको क्यानभासमा तिम्रो ओठको कुचीले आज बनाएको आकृति जीवनको मूलढोकैमा टाँगेर राख्नेछु ।
#प्रियतमा ले भर्खरै सन्देश पठाइन्– तिमीसँग बिताएका हरेक पलको माया लागेर आउँछ । उत्तर के लेखुँ ?
#प्रियतमा , नयाँ बर्षदेखि सबै लत छोड्छु भनेको त, तिम्रो मायाको के सारो तल लागेको ?
#प्रियतमा को गाथमा आराम नहुँदा म कसरी निर्धक्क निदाउन सक्छु र ?
#प्रियतमा , तिमी बेखबर भएको पल म कति तड्पिन्छु, तिमीलाई थाहा छैन र ?
#प्रियतमा , यति सानो उकालोमै थाकें नभन न । तिमी र म यस्ता हजार उकाला उक्लिनु छ । पुग्नु छ शिखर र बनाउनु छ सारा शिखरलाई होचो । शिखरमा पनि त चल्नेछ हिमबतास । त्यति बेला एकातिरबाट एकातिर तिमीले छेक्नेछौ, अर्कोतिर म छेक्नेछु । त्यो शिखरमा निरन्तर उभिन सकेमात्रै सफल हुनेछ हाम्रो प्रेम ।
#प्रियतमा तिम्रो फुटो सिरानीमुनि फुटोसँग बोलेर नहुनी ।
सबथोक बिर्सने, #प्रियतमा लाई चाहिं सम्झने । हैन मेरो स्मरणशक्तिलाई के भा’को हो आजकाल ?
#प्रियतमा , म हरेकपटक तिमीसँग छुट्दा अर्को भेटको परिकल्पनाले मुस्कुराउँछु ।
#प्रियतमा तिम्रै हो सप्पै । मेरो मुहारमा फैलिएको चमक, ओठमा खुलेको मुस्कान । विपनाका सुमधुर पल, सपनाका निर्बन्ध उडान । तिम्रै हो, यो जिन्दगीका फूल, पात र पत्कर । त्यसो त जब तिमीले बर्षायौ पियार, रहिनँ म आफूसमेत आफ्नो । अब लेखिनेछ पहिलो प्रेमको दस्तावेज । तिमीलाई भ्रम नरहोस्, त्यो पनि तिम्रै हो ।
#प्रियतमा तिमी उस्तो राम्री थिइनौ । न ठूला–ठूला गाजलु आँखा नै थिए । न घना बादलजस्ता थिए तिम्रा केशराशी । सादा पहिरनमा तिम्रा कुनै मादक अंग देखिएका थिएनन् । तर पनि मेरो मनमा तिमीले सितार बजायौ ।
बस् तिम्रो मुस्कानले मेरो हृदयमा हस्ताक्षर गरेको थियो त्यसपल। जसमा एउटै सुन्दरता थियो– निर्दोषपना । आज छुट्ने बेला पनि तिम्रो सुन्दरता उस्तै थियो । र, उस्तै गुलाबी छ तिमीले मेरो हृदयमा गरेको हस्ताक्षर ।
#प्रियतमा तिम्रा हर दुःख मतिर पठाइदेऊ । किनकि सहन सक्दिनँ तिम्रो आँखामा आँशु । र, कहिल्यै नभन्नू– मलाई रुन मन लागेको छ । तिमीले भनिसक्नु अघि नै म रोइसकेको हुन्छु ।
#प्रियतमा साना–साना कुरामा रिसाउने तिम्रो बानी कहिले जाला है ? तिमी रिसाएपछिका पल मेरा लागि औंशीको अँध्यारो रात हुन्छन् भन्ने पनि बुझौली कि कुनै दिन । पर्खिरहेछु त्यो दिन । पर्खिरहेछु पूर्णिमा पल ।
#प्रियतमा यो एकान्त, उदास र चिसो ठाउँ पनि स्वर्गको टुक्रा झैं लागिरहेछ तिम्रो उपस्थितिले l तिम्रो साथमा त सारा हिमपात पनि सहन गर्न सक्छु l यहि प्रेमको शक्तिले हजारौं ओठमा खोज्नु छ मुस्कान l
#प्रियतमा औधी खरो भो । पानीको तिर्खा त एक करुवाले दुई–चार घण्टाकै लागि मेटिन्थ्यो । तर मायाको तिर्खा त उधुमकै हुँदोरैछ, निरन्तर पिइरहन पर्ने । एकैछिन टुट्यो कि खरो भइहाल्छ भन्या ।
#प्रियतमा, ज्ञानीहरु भन्छन्– मौनतामा ठूलो शक्ति हुन्छ । ज्ञानीहरुले भनेको के गलत हुन्थ्यो ? तिमी बोलेका कयौं दिनभन्दा आजको मौन ब्रतले मेरो मनमा कयौं गुणा हलचल मच्चाइरहेको छ । मलाई थाहा छ- तिम्रै मनमा पनि त कम्ति तुफान आएको छैन । भन न, तिम्रो ब्रत कतिबेला सकिन्छ ?
#प्रियतमा ,जेनी माक्र्स भन्छिन्– प्रेमले उत्साहित बनाउँछ भने दुःखले स्पात । मसँग दुबोझैं मौलाइरहने तिम्रो प्रेम छ । र, बेहिसाब छन् दुःख । । कुनै दिन स्पातलाई उत्साहले पक्कै एउटा आकार दिनेछ ।
(Priyatama isacharacter,adivine lover, who is in the relationship withaguy. Following the ups and down of their love-relation, I had posted lots of statuses in my facebook and twitter account with has tag #प्रियतमा . They gained lots of sweet reactions from friends and readers. This is the record of them who haven't read or want to read again. I have presented those statuses in video format too.)